Jiri matraasi nke ukwuu na isi iyi dị n'ime iji mee ka azụmahịa gị dịkwuo mma
A na-eji font a na-eji mee ihe ederede. A na-eme ihe ngosi ahụ n'aka ekpe ma ọ bụ n'ihu uwe. Ngwurugwu © bụ ụdị ọzọ eji uwe ndị otu egwuregwu na aha ndị egwuregwu na akara ngosi. Onwere ihe pere mpe na oru a. Ọtụtụ ndị uwe elu na-enye ọrụ n'udo dị ka okpu, uwe elu polo, t-shirts
\_ "Ndị ọzọ ji nkà nke ejiji, ndị nne ojii na-eme ka ụmụ ha na-akpụ akpụ na-eme ka ụmụ ha mara mma, ha ga-alụ ọgụ megide kemịkal ndị a, na-emebi Sistemu, \_ "o kwuru. Isi mmalite: bit. Nchọpụta gburugburu Ly / 2w1lvh nyocha, ntanetị na Eprel 25, 2018.